Fanadiovana… anatiny sy ambadika | NewsMada
Fanadiovana… anatiny sy ambadika
Vita iny ny androm-pirenena ho an’ny fanadiovana. Ahoana na inona koa ny manaraka? Nanadiovana saim-bahoaka tamin’ny hetsika ny hoe mila ovaina koa ny toe-tsaina amin’izay fanadiovana izay: ny fanadiovana no mahatonga ny fahadiovana, manomboka eo amin’ny tena na ny tsirairay, isan’andro sy mandavantaona…
Mby aiza àry izay hoe fanovana toe-tsaina izay? Indrindra ho an’ny mpitondra fanjakana manentana ny vahoaka hadio sy hanadio… Misy ve, ohatra, ny fanadiovana amin’ny fitondrana sy fitantanam-panjakana? Toa endri-javatra ivelany no mahamaika fa tsy latsaka anaty, imaso ihany fa tsy ny ambadika sy ambadika…
Aiza ho aiza, ohatra, ny fanadiovana sy fahadiovam-panjakana amin’ny fisian’ny kolikoly avo lenta? Toy izany koa ny amin’ny kiantranoantrano, tsy fanarahan-dalàna, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny tandapa manaratsy endrika sy mandoto fanjakana amin’ny fangoronan-karena tsy marina, ny fisian’ny tsimatimanota…
Manginy fotsiny ny fahalotoana maharikoriko amin’ny tsy fisaraham-pahefana. Mifangaro voraka be ihany ny fahefana mpanao lalàna, mpitsara, mpanatanteraka. Mandoto rano misalovana ny asan’ny mpanao lalàna sy mpitsara hatrany ny mpanatanteraka amin’ny fitsabahana, fibaikoana, fanindriana, fanerena, famoretana…
Odian-tsy hita sy tsy fantatra avokoa izany karazan-doto sy tsikoko izany? Loto mivangongo sy mitakovana, mila kosehina sy esorina. Na inona na inona atao, anisan’ny mahatonga ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ho sempotra tsy avy miaina izay fahalotoana eo anivon’ny fitondrana sy fitantanam-panjakana izay.
Raha tsy izany, mihaingo ambony tsikoko ihany ny tena amin’ity hoe fahadiovana ivelany fa tsy latsaka anaty, imaso ihany fa tsy ambadika sy ambadika. Ahoana na rahoviana vao hisy ny tena fanadiovam-panjakana? Ny madio no afa-kanadio, na maloto eo am-panadiovana amin’ny famoahana ny marina ahay. Ho sahy izany ireo hoe tia madio?